Saadaat Nashaa: 'Jaalle Lammaan adeemsa keessa ejjennoo isaanii miidiyatti ibsachuu danda'u' - BBC News Afaan Oromoo
Saadaat Nashaa: 'Jaalle Lammaan adeemsa keessa ejjennoo isaanii miidiyatti ibsachuu danda'u'
Obbo Lammaa Magarsaa garaagarummaa yaadaa Paartii Badhaadhinaa irratti kanaan dura kaasan karaa koree hojii-raawwachiistuu paartichaa mari'achuun hiikneera jedhan Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaatti Itti-Gaafatamaan Ijaarsa Siyaasaa Magaalotaa Obbo Saadaat Nashaa.
Ministirri Humna Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa walitti baquu paartilee akka hin deeggarre kanaan dura af-gaaffii VOA waliin taasisan irratti ibsanii ture.
'Kun imaanaa uummattni nutti kenne nyaachuudha' jechuun ture yaada isaanii kan ibsan. Jalqabaa eegaluun walitti baquu paartilee kan jedhu sanas mormaa akka turan himaniiru.
Haatahu malee, ergasii Obbo Lammaa waliin mariin gaggeeffamee garaagarummaan yaadaa ture hiikamuu Paartiin Badhaadhinaa fuula Feesbuukii isaanii irratti ibsanii ture.
Maal irratti waliigaltan? Yaada Obbo Lammaa akkamitti fudhattan kan jedhu irratti garuu waanti ibsame hin turre. Obbo Lammaanis deebi'anii yeroo dhimma kana irratti miidiyaaleef ibsa kennan hin mul'anne.
Obbo Saadaat koreen hojii-raawwachiistuu Paartii Badhaadhinaa irratti mari'atee garaagarummaa malee waliigalameera jedhan.
Obbo Lammaan sababa garaagarummaa yaadaa paarticha irratti kaasaniifis hojii irraa hin dhorkamne ammas hoggansa irra jiru jedhan.
Garaagarummaan tures wal hubachuu dhabuu irraa kan dhufe malee kan bu'uuraa ykn ilaalcha siyaasaaa addaa miti jedhan. Kun miira qabsoon ilaalamee hiikameera jedhan Obbo Saadaat.
Haa tahu malee Xiinxalaan siyaasaa fi amma miseensa KFO kan tahan Obbo Jawaar Mahaammad wal tajiii tibbana Hararitti gaggeessan irratti waa'ee Obbo Lammaa cimsuun dubbataa turan.
Jawaar erga biyyatti deebi'ee kompiitera qabsoo ittiin gaggeessaa ture jedhe Obbo Lammaaf kennee ture.
Obbo Lammaan kompiitera koos hin ganne wan gaarii ittiin hojjechaa jira Feesbuukii irratti maxxansuu baatus jechuun dubbate.
Obbo Lammaan waan Oromoof tolu cimsanii akka hojjetanis himanii yeroo gabaabaa keessattis lakkaa'ee akka isinitti deebi'u shakkii hin qabu jedhe Jawaar.
Obbo Saadaat Nashaa Obbo Lammaan hoggansa irra jiru haa jedhan iyyuu malee gama biraan ammoo namootni keessa beekna jedhan Obbo Lammaan hojii irra akka hin jirre himu.
Kun hammam dhugaa akka tahe Obbo Lammaa irraa qulqulleessuu hin dandeenye. Obbo Saadaat ammoo garaagarummaan ture hiikamee waliigalteedhaan hojii irra jiru jedhan.
Obbo Lammaan maaliif miidiyaatti dubbachuu dhaban?
Kan booda ejjennoo koo miidiyaalee garaagaraaf nan ibsa jechuun Obbo Lammaan af-gaaffii VOA waliin taasisan irratti ibsanii ture.
Odeeffannoo kanatti dhiyaatan biroo:
Obbo Lammaan attamiin siyaasa Itoophiyaa keessatti gurra horatan?
Jawaar waa'ee Lammaa, gamtoomuu paartilee Oromoofi TPLF maal jedha?
Haatahu malee, araaramuu isaaniis tahe ejjennoo isaaniin itti fufuu ergasii wanti ibsame hin jiru.
Gama miidiyaalee hawwaasaan garuu Obbo Lammaan akka miidiyaaleetti hin dubbanne dhorkamaniiru yaada jedhutu barraa'aa ture.
Dabalataan namootni hedduun maaliif as bahanii ofuma isaanii hin dubbatan ejjennoo isaanii fi waan irratti wal tahan jechuun gaafatu.
Obbo saadaat, ''Garaagarummaan ka'e mariidhaan hiikamuun dhugaadha, soba miti. Erga mariin gaggeeffamee waliigalteedhaan hojjetamaa jira. Ammas hoggansa irra jiru," jedhu.
Garuu maaliif yaada jalqaba kaasan sana deebisanii miidiyaaleef hin ibsine kan jedhu irratti dhawataan hojii keessatti, suutaan dhufuu danda'a; cufaa miti jedhan.
Obbo Lammaan jaallattoota miliyoonotaan aka qabaman kan himamuu fi nama siyaasa Itoophiyaa jijjiire jedhamuun miidiyaalee garaagaraan ibsamaa turan har'a callisuun gaaffii guddaa kaasaa jira.
Obbo Saadaat 'Jaalle Lammaan guyyaa tokko adeemsa hojii keessa suuta suutaan yaada isaanii ibsuu danda'u' jechuun garuu hammam guutummaatti callisa isaanii kanaaf deebii taha?
Garuu ammoo 'waan akka paartiitti ibsame sun yaada koree hojii raawwachiistuuti, yaada jaallee Lammaati jedhanii fudhachuun gaariidha,' jedhan Obbo Saadaat.
Obbo Saadaat Obbo Lammaan akka hin dubbannee dhorkamaniiru oduun jedhu kun ka'umsi isaa shakkii irraati jedhan. Waan paartiin ibse sun fudhatama hin qabu, yoo Obbo Lammaan dubbatan malee yaadni jedhu dogogoraa jedhan.
Isaanis adeemsuma hojii keessa yaada isaanii ni ibsu jennee yaadna jedhan Obbo Saadaat.
Haatahu malee, Obbo Lammaa Magarsaa araaramuu isaaniis tahe akka ejjennoo isaanii duraaniin itti fufuu waan ibsan hin qaban.
Hoggantoota ejjennoo Obbo Lammaan deeggaran hoggansa irraa kaasuu
Tibbana godinaaleefi aanaalee tokko tokko irraa hoggansa ture kaasuun bakka buusuufi jijjiruun akka jiru dhagahamaa jira. Bulchitootni godinaalee akka Wallagga Bahaa, Godina Horroo Guduruu as keessatti eeramaniiru.
Kun ammoo namoota ilaalcha Obbo Lammaa Magarsaa qabaniifi deeggaran hoogansa irraa kaasuudha kanneen jedhanis jiru.
Haatahu maleem, Obbo Saadaat Nashaa paartiin madaallii isaatiin hoggansa isaa bakkaa bakkatti ni sochoosa. Ramaddis ni kenna jedhan.
Ammas kan tahaa jiru kanuma jedhanii, kun ammoo sababa garaagarummaa yaadaa irraa kan ka'e miti jedhan.
Hoggantoota sabbonummaa leellisan of irraa dhiibaa hin jirru. Bulchitootni godinaalee eeramanis sadarkaa naannootti sadarkaa itti-aanaa biiroofi kaan ammoo gorsaa tahanii akka hojjetanidha kan taasifame jedhan.
"Amma yaada Obbo Lammaa waan jedhu hin jiru. Yaada paartii malee," jedhan. Garaagarummaan ture hiikameera waan taheef jechuun ibsan.
BBC'n amma namootni hoggansaaf muudaman namoota addatti imaammata paartii haaraa irratti leenjii fudhatan qofaadha jedhama. Kun akkamiin tahe? jechuun kan gaafateefis, "hoggansi leenjii hin fudhanne hin jiru," jedhan Obbo Saadaat.
Warri turanis hoggansa irra jiru jedhanii, amma namoota leenjii keessa darbaniifi hubannaa Paartii Badhaadhinaa argatantu naannoodhaa hanga aanaatti hoggansa irratti ramadamaa jira jedhan.
Kun ammoo haaraa isa hin jechisiisu jedhan Obbo Saadaat.
Dureettii Afrikaa biyyashee saamtee sooromte
Haleellaan miisaa'eela Yamanitti qaqqabeen loltoonni ajjeefaman 111 qaqqabeera